Alcadaala “Fasiraado khaldan ayaa laga bixiyay warkii Dowladda Soomaaliyeed sii deysay” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Alcadaala “Fasiraado khaldan ayaa laga bixiyay warkii Dowladda Soomaaliyeed sii deysay”
Alcadaala “Fasiraado khaldan ayaa laga bixiyay warkii Dowladda Soomaaliyeed sii deysay”
Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala), Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya ayaa sheegay in fasiraado khaldan laga bixiyay warkii ay Dowladda Federaalka ku sheegtay inuu burburay shirkii Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
“Fasiraado badan oo khaldan ayaa laga bixiyay warkii ay Dowladda Soomaaliyeed sii deysay. Warka dowladda ay sii deysay wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dowladda waxay ka suggayeen in ay dalka doorasho u dirto, oo dalka uu doorasho aado iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waqti badan ayuu qaatay, jahwareer badan ayaa abuurmay, waxaan ka fursan weynay oo ku khasbanaanay in dadka Soomaaliyeed aan u sheegno meesha ay caqabaddu ka jirto, oo ah Jubbaland iyo Puntland madaxdoodii inay diidan yihiin.” Ayuu yiir Wasiir Alcadaala oo ka qayb qaadanayay dood ka baxday BBC Somalitv.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Jubbaland, Xirsi Jaamac Jaani oo doodda ku wehlinayay Wasiir Alcadaala ayaa dhankiisa sheegay inay Dowladda Federaalka tahay midda diidan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Shalay ayadoo la yiri hala soo wada tashto, sidii laba maalmood markuu shirka socdayba loo yiri ayuu Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday jeediyay, ka dibna intii aanba guryaha la tagin ayaa waxaa soo baxay cajalad la shiday, oo ah inuu shirkii burburay.” Ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Jubbaland.
Previous articleGuluf ciidan oo ka socda Bariga Gobolka Galgaduud (SAWIRRO)
Next articleMadaxweyne Geelle oo codkiisa dhiibtay (SAWIRRO)